Global Voices teny Malagasy » Tranga fanorisorenana ara-nofo ao Trinité & Tobago manasongadina fa ilaina ny politika tsara kokoa momba izany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Desambra 2019 5:31 GMT 1	 · Mpanoratra Jada Steuart Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Karaiba, Trinite sy Tobago, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Sendikà, Toekarena sy Fandraharahàna, Vehivavy sy Miralenta, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Zon'olombelona
Ny Lapan'ny Fitsarana any Port of Spain, Trinite. Saripikan'i Klaas Vermaas, CC BY-ND 2.0.
Niteraka adihevitra momba ny politikan'ny fanorisorenana ara-nofo any amin'ny toeram-piasana ny tranga fanorisorenana ara-nofo  vao haingana tany Trinite sy Tobago, indrindra rehefa misy fiantraikany amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona (LGBTQ) izany.
Rishi Persad Maharaj, izay niasa tamin'ny servisy ho an'ny mpanjifa tao amin'ny Banquet and Conference Center Limited (BCCL), ao amin'ny tranoben'ny Cascadia Hotel no nitondra ny raharaha. Nilaza i Maharaj fa nanao fanamarihana sy fihetsika tsy mendrika taminy ny talen'ny asa, izay vehivavy. Tamin'ny taona 2015, nanao fitarainana tany amin'ny Equal Opportunity Commission  (Vaomieran'ny Fampitoviana Hirika) (EOC) i Maharaj, noho ny “fanavakavahana amin'ny asa mifototra amin'ny fanorisorenana ara-nofo sy ny fampanaovana ho lasibatra”.
Tao anatin'ny tafatafa nialoha ny fakana am-bavany azy, naneho (ny talen'ny asa) ho olom-pirenena tsara taiza, vady sy renim-pianakaviana, manana “tsy fandeferana mihitsy” amin'ny fitondran-tena manavakavaka sy manakivy, ny mpisolovavan'ny voampanga. Nasongadin'izy ireo ihany koa fa pelaka i Maharaj—filazana izay tsy nolaviny.
Ny fironany ara-pananahana no antony lehibe iray satria tsy mamaritra ny “ara-nofo” ny Lalànan'ny Fampitoviana Hirika ary nilaza ny tribonaly fa tsy afaka mandray  ny voasoratra hoe ho an'ireo lehilahy pelaka. Nolavina ny raharaha noho izany ary voatery nandoa ny vola ny lany ara-pitsarana ho an'ny (mpiaro ny) voampanga i Maharaj.
Nikorontana ny raharaha: voalaza fa efa nametraka ny fifandirana i Maharaj talohan'ny niverenany tany amin'ny fitsarana ka nanapa-kevitra ny mpitsara fa nanonona amim-pahadisoana ny hotely ho voampanga i Maharaj. Saingy nofakafakaina lalina ny lalàna mifehy ny fizotran'ny raharaha tao amin'ny Tribonalin'ny Fampitoviana Hirika — ivon'ny fanapahankevitry ny fitsarana —.
Nanjary teboka nifantohan'ny adihevitra tao amin'ny media sosialy ny fironana ara-pananahan'i Maharaj. Araka ny filazan'i  Leela Ramdeen, izay anisan'ny tao amin'ny fitsarana nanombana ny raharaha, tsy tafiditra ao anatin'ny Lalànan'ny Fampitoviana Hirika ny fanorisorenana ara-nofo, na koa ny fironana ara-nofo .
Vakio bebe kokoa: Na dia misy aza ny fanoherana, miditra amin'ny dingana ara-dalàna manan-tantara ho amin'ny fitovian-jon'ny LGBT i Trinite sy Tobago 
Nitaky lalàna “mba hiatrehana indrindra ny fanorisorenana ara-nofo” ary hamaritana ny dikan'ny hoe “sexe” (sitsy) i Ramdeen, sady nanampy hoe “Izahay, tribonaly, dia tsy afaka manitatra ny “sexe” (sitsy) hihoatra ny lahy sy vavy. ” Ho an'ny mpisera media sosialy maro, milaza ny fanamarihany fa izay rehetra mipetraka ivelan'ity sehatra ity dia tsy arovan'ny lalàna amin'izao fotoana.
Nanantitrantitra i Ramdeen fa tsy ampy ny volavolan-dalàna momba ny fanorisorenana ara-nofo, natolotr'i Jennifer Baptiste-Primus , minisitry ny asa sy ny fampivoarana ny orinasa madinika tao amin'ny parlemanta  tamin'ny marsa 2019, ary nilaza fa ilaina ny lalàna mba hanomezana fahefana ny politikam-panaovan-dalàna.
Politikan'ny fanorisorenana ara-nofo ao Trinite sy Tobago
Voaresaka matetika tato anatin'ny taona vitsivitsy ny lohahevitra momba ny fanorisorenana ara-nofo any amin'ny toeram-piasana, izay antsoin'i  Gabrielle Hosein, avy ao amin'ny Ivom-pampianarana momba ny lahy sy ny vavy sy ny fampandrosoana ao amin'ny Oniversiten'i Antilles hoe “ny toetra hetero(sexuel), fehezin-dray, anjakazakan'ny lahy ao amin'ny fanjakana Karaiba”.
Tamin'ny taona 2017, nanamarika i Hosein fa ny lalàna momba ny fanorisorenana ara-nofo, izay “tena mihaika ny karazana tombondahiny tafiditra amin'ny fampiharana ny fahefan'ny lahy” dia tsy laharam-pahamehan'ny lalàna ao amin'ny firenena.
Na dia manana politikam-pirenena momba ny fanorisorenana ara-nofo any amin'ny toeram-piasana  aza i Trinite sy Tobago, izay miresaka ny fifandirana ara-barotra taloha mamaritra ny fanorisorenana ara-nofo, [ho] tsy misy lalàna mafy kokoa, ary tahaka izany koa ny politika mahomby momba ny fanorisorenana ara-nofo ao anatiny sy ivelan'ny tontolon'ny toeram-piasana. Na izany aza, tsy lalàna ny politikam-panaovan-dalàna – izay midika fa tsy misy fenitra sy taridalana izany.
Napetraka teo anoloan'ny Tribonalin'ny Fampitoviana Hirika ity tranga manokana ity mba hiatrehana izany amin'ny [fanaovan]dalàna. Saingy tsy ahitana antsipirihany momba ny fanorisorenana ara-nofo sy ny maro hafa, amin'ny fanavakavahana ireo mpikambana ao amin'ny vondron'olona LQBTQ+ ny Lalànan'ny Fampitoviana Hirika.
Raha ny marina, dia Belize , Barbades sy Jamaika  (efa nohavaozina ankehitriny).no hany zaratany Karaiba manana lalàna momba ny fanorisorenana ara-nofo.
Rehefa nampidirina ny volavolan-dalàna vaovao momba ny fanorisorenana ara-nofo tao amin'ny parlemanta Trinité sy Tobago tamin'ny fiandohan'ity taona ity, naneho ny heviny  ny fikambanan'ireo vehivavy mpiantsoroka (cadres) eto Trinite sy Tobago  (AFETT):
Miombonkevitra izahay fa raharahan'ny rehetra ny fanorisorenana ara-nofo eny amin'ny toeram-piasana, satria misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina, ny tontolo iainana, ny toekarena, ny fahasalamana ary ny fiarovana izany.
Nandrisika  ny AFETT fa ny politika volavolan-dàlana dia tokony hanome fiarovana tanteraka, sy “lalamben'ny fanasaziana ho an'ny olona manao fiampangana lainga sy ho an'ireo olona mampiasa ny politika amin'ny fomba ratsy:”
Izany indrindra no inoanay fa misy ny olana tahaka ny fanorisorenana ara-nofo mankany amin'ny ankilany [mivadika] ahafahan'ny olona [sasantsasany] mampiasa fiampangana ho fitaovana fanodikodinana.
Tsy misy ny tokom-pizarana momba ny fanorisorenana ara-nofo eny amin'ny toeram-piasana ny Lalànan'ny Fampitoviana Hirika . Ny andininy faha-11 amin'ny lalàna dia mamaritra ny “fanavakavahana amin'ny asa” mifototra indrindra amin'ny ara-nofo. Na izany aza, tsy hita ilay teny hoe “fanorisorenana ara-nofo”. Midika koa izany fa tsy ao anatin'ny fahefan'ny Equal Opportunity Commission  (EOC na Vaomieran'ny Fampitoviana Hirika), sampan'ny governemanta misahana ny fanavakavahana eny amin'ny toeram-piasana ny raharaha tahaka izany
Natao ho an'ny olom-pirenena ny Tribonalin'ny Fampitoviana Hirika mba handaminana amin'ny fomba tsy miangatra, mahomby ary amin'ny sarany mirary ny fanavakavahana amin'ny fifanolanana eo amin'ny toeram-piasana, saingy amin'ny tranga maro, midika ny fahabangan'ny politika fa voafetran'ny lalàna izay mila fanaovazana ny fiantraikan'ny tribonaly — izay koa no mahatonga ny olona maro mahatsapa fa tsy afaka miteny izy ireo.
Tamin'ny raharahan'olona ambony vao haingana mahakasika ny filohan'ny Angostura Holdings Limited, Rolph Balgobin, niato ny fahafahany mihazona ny andraikiny rehefa niampanga azy tamin'ny fanorisorenan ara-nofo  ny vehivavy mpiasa iray. Afaka tamin'ny fiampangana izy avy eo, ary nanambara ny fanadihadiana tao amin'ny orinasa fa nifanandrify tamin'ny famotorana tsi-fetezana ara-bola tao amin'ilay orinasa nataon'ilay vehivavy ny filazan'ity vehivavy niampanga azy ity. Voaroaka  avy eo ity vehivavy mpiantsoroka izay niampanga azy ity .
Ny tranga tahaka itony dia manasongadina ihany ny zava-misy fa raharaha sarotra ny fanorisorenana ara-nofo, mampiseho fa mila miatrika izany amin'ny lalàna araka ny tokony izy ny governemanta fa tsy mamela ny orinasa irery handamina ireo raharaha ireo.
Angamba rehefa misy ny lalàna sahaza, dia hihena ny tahotry ny vahoaka hitatitra tranga momba ny fanararaotana ara-nofo, satria mahita ireo olona rehetra (lahy sy vavy) sy ny fironana ara-pananahana rehetra fa voaaro izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/05/145324/
 tranga fanorisorenana ara-nofo: https://newsday.co.tt/2019/11/06/eot-dismisses-sexual-harassment-case-against-woman/
 Equal Opportunity Commission: http://www.equalopportunity.gov.tt/
 tsy afaka mandray: https://www.guardian.co.tt/news/workers-sexual-harassment-claim-dismissed-6.2.979753.8c7e5d091b
 fironana ara-nofo: https://gspottt.files.wordpress.com/2012/04/eoa-2012.pdf
 Na dia misy aza ny fanoherana, miditra amin'ny dingana ara-dalàna manan-tantara ho amin'ny fitovian-jon'ny LGBT i Trinite sy Tobago: https://globalvoices.org/2018/04/17/though-opposition-remains-trinidad-tobago-takes-a-historic-legal-step-towards-lgbt-equality/
 Jennifer Baptiste-Primus: https://www.molsed.gov.tt/mediaroom/latest-news-events/9-uncategorised/358-address-by-sen-the-hon-jennifer-baptiste-primus-on-the-national-workplace-policy-on-sexual-harassment-2019
 fahefana : https://trinidadexpress.com/news/local/sexual-harassment-policy-toothless/article_1f5a140e-00ff-11ea-b77a-43e249614044.html#utm_campaign=blox&utm_source=twitter&utm_medium=social
 politikam-pirenena momba ny fanorisorenana ara-nofo any amin'ny toeram-piasana: https://www.molsed.gov.tt/images/National_Workplace_Policy_on_Sexual_Harassment_-_18-2-19_-_FINAL.pdf
 naneho ny heviny: https://www.afett.com/national-sexual-harassment-policy
 fikambanan'ireo vehivavy mpiantsoroka (cadres) eto Trinite sy Tobago: https://www.afett.com/
 fanorisorenana ara-nofo : http://equalopportunity.gov.tt/sites/default/files/Guidlines%20on%20Sexual%20%20Harrassment_FINAL.pdf
 Lalànan'ny Fampitoviana Hirika: https://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/22.03.pdf
 niampanga azy tamin'ny fanorisorenan ara-nofo: https://www.cnc3.co.tt/morning-brew/many-questions-angostura-sexual-harassment-case
 nanambara : http://newsauce.org/2017/12/03/is-there-more-to-the-angostura-story/